Konfur Afrikanka oo Dil ku bilaabay Dadka Muqdisho // Warbixin | KEYDMEDIA ONLINE
Konfur Afrikanka oo Dil ku bilaabay Dadka Muqdisho // Warbixin
Muqdisho (KON) - Waxaa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho Dil layaab leh oo loo geystay muwaadin u dhashay dalka Soomaaliya isla markaana uu dilay Nin Ajnabi ah oo u dhashay dalka Koonfur Afrika.
Dilkaani ayaa waxaa uu ka dhacay Gudaha Garoonka Diyaaaradaha ee Aadan Cabdulle, iyadoona ninka dilkaasi loo geystay iyo Ninkaani koonfur Afrikaanka ah ee Dilka geystay ay ka wada tirsanaayeen Shaqaalaha Shirkada SKA ee Maamusha Garoonka Muqdisho.
Qaar ka mid ah shaqaalaha Shirkadda SKA ee garoonka Muqdisho oo ay la xiriirtay Keydmedia Onlin ayaa sheegeen in ninkaasi Soomaaliyeed qaab ay ka wada caroodeen loo dilay, iyadoona ay tilmaameen in ninkaani Konfur Afrikaanka ah uu awood u adeegsaday dilka ninkaani Soomaaliga ah ee Geeriyooday, waxaa ayna tilmaameen in uu darbi madaxa kaga garaacayay ilaa uu ka geeriyoodo.
Lama oga asbaabta uu u Dilay ninkaani Koonfur Afrikaanka ah marxuumkaasi muwaadinka ah ee Soomaaliyeed, balse Shaqaalaha Qaarkood ayaa sheegay in uu ahaa ninka Koonfur Afrikaanka ee dilka geestay madaxa ninka uu dilka u geystay ee Soomaaliyeed.
Arinka xiisada dhalisay ayaa ah ka dib markii ay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed gacanta ku dhigeen Ninkii Geystay dilka xabsiggana loo taxaabay ayaa maalintii shalay aheyd lagu dhex arkay gudaha garoonka Muqdisho ninkii dilka geystay oo wata Shaqadiisii, taasoo dhalisay in ay ka caroodaan Shaqaalaha soomaaliyeed ee shirkadda SKA.
Shaqaalaha ayaa haatan Baaqyo kala duwan u kala diraya Hay’adaha Dowladda Soomaaliyeed, iyadoona ay ku kala baaqayaan in ninkaani dilka geystay la marsiiyo waajibkii xabsigana lagu celiyo iyo in ay Dowladda soomaaliya dalka ka saarto Shirkadda SKA oo ay ku tilmaamayaan in ay qarash faro badan ku bixiyeen soodeenta Dilaaga Dilka u geystay Marxuumka Soomaaliyeed.
Ugu danbeentii carada shaqaalaha soomaaliyeed ee Shirkadda ay ka qaadeen Dilka ninkaani Soomaaliyeed u geestay ninka Koonfur Afrikaan ah ayaa ka daran carada Bulshada Soomaaliyeed ay ka qabeen dilalka Muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu geysanayay Gudaha dalka Koonfur Afrika, lamana qiyaasi karo Arimaha ka soo socda Bulshada Muqdisho oo haatan hadal heyntooda ugu badan ay tahay Dilka loo geysanayo Muwaadiniintooda ku dhaqan Dalkaasi iyo dilka haatan ka dhacay Garoonka Muqdisho.